Tirada muhaajiriinta ka gudbaya kanaalka Ingriiska oo sii kordheysa Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka CaalamkaTirada muhaajiriinta ka gudbaya kanaalka Ingriiska oo sii kordheysa
Tirada muhaajiriinta ka gudbaya kanaalka Ingriiska oo sii kordheysa
June 3, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Tirada muhaajiriinta isku dayaya ama ku guuleysanaya inay ka gudbaan kanaalka u dhexeeya Yurub iyo Ingiriiska ayaa sii kordhaya. Kadib cimilo wanaagsan, in kabadan 600 oo qof ayay ciidamada Xuduudaha UK qabteen maalmihii lasoo dhaafay.
Muddo cimilo wanaagsan ayaa inta badan la arkaa kororka tirada muhaajiriinta isku dayaya inay ka tallaabaan biyaha u dhexeeya Faransiiska iyo Biljamka iyo UK. Maalmihii la soo dhaafay.
Sida laga soo xigtay tirakoobka dowladda ee ka socda Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Boqortooyada Ingiriiska (wasaaradda arrimaha gudaha), 568 qof ayaa ka gudbay isbuucii hore. Talaadadii, 1-dii Juun, lix doomood oo dheeri ah ayaa la ogaadey “oo ay saaran yihiin 132 qof,” BBC ayaa werisey.
Muhaajiriinta la socday lixda doonyood Talaadadii waxaa qabtay ciidamada Xuduudaha UK. Mid ka mid ah doomaha waxaa goobjoog ka ahaa weriyaha BBC Simon Jones iyo kooxdiisa. Wuxuu sheegay in doonta ay daba socdeen markab Faransiis ah “illaa ay ka gaadhay biyaha UK.”
3,500 ayaa uga gudbay Channel-ka UK sanadkan
Dowladda UK ayaa sheegtay in sanadkan illaa maanta, 3,500 oo qof ay si guul ah uga gudbeen kanaalka. Dowladda UK ayaa wacad ku martay inay si adag ula dagaallami doonto dadka tahriibiyeyaasha ah ee dadka ka keenaya kanaalka, kadib markii in ka badan 8,000 ay ku yimaadeen wadadaas sannadka 2020.